Yintoni eyenziwa nguTadalafil? Yintoni iTadalafil? phantsi kwegama lusetyenziselwa ukunyanga ukungasebenzi kwe-erectile (ukungabi namandla) kunye neempawu ze-prostatic hypertrophy (i-prostate eyandisiweyo). Olunye uhlobo lwe-tadalafil yi-Adcirca, esetyenziselwa ukunyanga i-pulmonary arterial hypertension kunye nokuphucula umthamo wokusebenza kumadoda nabasetyhini. Ukusetyenziswa kweTadalafil yonyango lonyango [...]